त्रिवि शिक्षण अस्पताल : कोरोना विरामी माथि सेतो अपराधको दर्दनाक कथा | परिसंवाद
रघु मैनाली	 शनिबार, असार १२, २०७८ मा प्रकाशित
जीवन कै भयानक निराशापूर्ण क्षण । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कोरोना विरामी र आफन्तहरुसंग पीडाले भरिएका चित्कार छन् । अस्पतालमा यी चित्कार सुनीदिनेसम्म पनि कोही छैनन् र आतङ्कले भरिएको चकमन्नतामा त्यसै हराउँछन् । आफ्नो प्राण डाक्टरको दयामा छोड्न बाध्य र डाक्टरका विरुद्धमा कुनै फिराद गर्न नसक्ने अभागी कोरोना विरामी र उनीहरुका विक्षिप्त आफन्तहरु छन् । र, यहाँ यमराजको इच्छा अनुसार काम गर्न उद्यत्त दुराचारीहरु सेतो एप्रोन लगाएर बसेका छन्।
यावत सबुतका आधारमा अब निर्धक्क भन्नु पर्नेहुन्छ– त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टरहरु केवल तलबी गोठाला मात्र हुन । तलबी गोठालाहरु मालिकको आँखा छल्नुमा नै आफ्नो धर्म र बुद्धिमानी ठान्छन् । त्यसैले तलवी गोठाला र सच्चा स्वास्थ्यकर्मीबीच तुलना हुनसक्तैन । मलाई विश्वास छ– सच्चा स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य सेवा कर्तव्य मात्र होइन मानव करुणाको कठोर सङ्कल्प हो । आस्तिकहरुको भाषा सापट लिदैं म दोहो¥याएर भन्छु– सच्चा डाक्टर र नर्सहरु सेतो भेषमा जनकल्याणका लागि अस्पतालमा अवतरित देवी, देवता हुन । शास्त्रका अनुसार देवी देवताका ठिमाहा सन्तान भनेका पिचास हुन्छन् । यी डाक्टरहरुको हर्कत हेर्दा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा चाहिँ देवी देवता होइन, नरपिचासहरुले सेतो भेष धारण गरेका छन् भन्न लाचार छु ।
दोस्रो, निर्लज्ज जालसाजीको कहालीलाग्दो सबुत । संयुक्त राज्य अमेरिकाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अस्पताल भर्ना भएका विरामीको मृत्यूदर ३५ प्रतिसतभन्दा कम रहेको छ । नेपालका केही अस्पतालहरुको तथ्याङ्क हेर्दा अस्पताल भर्ना भएका विरामीको मृत्यू दर ६० प्रतिसत छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा यसबारेमा तथ्य बताउँन चाँहदैन तर अस्पतालमा भर्ना भएका कोराना संक्रमितको मृत्यूदर लगभग ९५ प्रतिसत रहेको अनुमान छ । यसको अर्थ त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका एक सय जना कोभिड विरामीमाध्ये ९५ जनाको मृत्यू भइरहेछ । मृत्यू हुनेको दर कहालीलाग्दो देखिएपछि अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालले संरचनागत रुपमा नै जालसाजी शुरु गरेको छ । उसले निको हुने विरामीको संख्या बढाउन उपचारमा सुधार ल्याउने प्रयत्न गर्नुको बदला वार्डमा भर्ना भएको विरामी क्याविनमा सर्दा डिस्चार्ज गर्ने प्रथा बसालेको छ र विरामी सिकित्त भएपछि अस्पतालले गर्न सक्ने अब अरु केही छैन घर लैजानुभए हुन्छ भनी डिस्चार्ज गर्न प्रेरित गर्ने जस्ता कुटिल चाल सुरु गरेको छ । यसले पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर मात्र नभएर सिङ्गो अस्पताल व्यवस्थापन नै विरामीको स्वास्थ्यमाथि रणचण्डी बनेर ताण्डब मच्चाइरहेछ भन्ने कुरालाई सपाट चित्रण गर्छ । चोरका हजार दाउ भने झैं उनीहरु पनि नयाँ नयाँ दाउ खोज्नपट्टि तल्लीन छन् ।
मलाई पूर्ण हेक्का छ– स्वास्थ्य विज्ञानका सारा आविष्कारहरु कोरोनासामु निहिर छन् । कोरोना विरुद्धको लडाईमा स्वास्थ्यकर्मीका ज्ञान अपर्यात छन् । जसरी पनि डाक्टरले विरामी बचाउन पर्छ भने अघोरी आग्रह हाम्रो थिएन । तर डाक्टरले विरामी बचाउन इमान्दार प्रयास गर्छन भन्ने चाहिँ हाम्रो दृढ अपेक्षा थियो । अस्पताल भर्नाको तीन दिनसम्म विरामीको सामान्य परिक्षणसम्म नगरी हामीलाई उल्टै विरामीको छाती ‘क्लियर’ छ भन्दै भ्रममा राखे । चौथो दिन जोडबल लगाएर एक्स–रे गराउँदा जब गम्भीर निमोनिया देखियो, तब डा. शन्तकुमार दासले विरामी ढिलो ल्यायौ भनी हामी माथि आरोप थोपरेर उम्कने दुस्प्रयास गर्नुभयो । हामीलाई त्यसपछि त ती डाक्टरहरुले विरामीप्रति लापरवाही मात्र गरेको होइन उनीहरु सेतो एप्रोनमा सजिएका अधम, नीच र दुष्ट समेत रहेछ भन्ने लाग्यो । हामीलाई पूर्ण एकिन भयो– सेतो एप्रोन लगाएर डा. शन्तकुमार दासहरुको अवतारमा यमराज हामी माथि कुटिल छल गर्दैछ । त्यसपछि जतिसक्दो चाँडो यस्ता छलीको नजरबाट आफ्नो विरामीलाई बचाउनु पर्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान गयो । उनीहरुको त्यो बहुलठ्ठी र बकवासपूर्ण बर्बराहट सुनिसकेपछि त्यहीँ उपचार निरन्तर गर्नु थप अनर्थकारी दुर्भाग्यलाई पर्खनु मात्र हुने थियो । हामी तत्काल शिक्षण अस्पतालबाट विरामी डिस्चार्ज गर्ने तर्फ लग्यौं ।
यी मेरा निजी विलौना र रुवावासी विल्कुलै होइन। सुन्दा मात्र पनि हृदय भाउन्न हुने यस्ता कुरा तपाईलाई भन्नुको मेरो एकमात्र ईरादा हो– जीवनको आशा लिएर चाहिँ कोरोनाका विरामीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कसैले पनि नलैजानु होला । महान सत्कर्म गर्ने थलोका रुपमा तपाई, म लगायत साराले विश्वास गरेका अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीका बारेमा यसो भन्नुपर्दा मेरो मुटु नराम्ररी कुँडिएको छ तर म दुखका साथ दोहो¥याउँछु– त्रिवि शिक्षण अस्पताल पु¥याएको विरामी कोरोना भाइरस स्वयंले दया ग¥यो भने मात्र फर्किए घर आउँछ नत्र केही दिनमा शव बनेर आर्यघाट तर्फको यात्रा नै उसको दुखान्त नियति हुनेछ ।
यी मेरा निजी विलौना र रुवावासी विल्कुलै होइन । सुन्दा मात्र पनि हृदय भाउन्न हुने यस्ता कुरा तपाईलाई भन्नुको मेरो एकमात्र ईरादा हो– जीवनको आशा लिएर चाहिँ कोरोनाका विरामीलाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा कसैले पनि नलैजानु होला । महान सत्कर्म गर्ने थलोका रुपमा तपाई, म लगायत साराले विश्वास गरेका अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीका बारेमा यसो भन्नुपर्दा मेरो मुटु नराम्ररी कुँडिएको छ तर म दुखका साथ दोहो¥याउँछु– त्रिवि शिक्षण अस्पताल पु¥याएको विरामी कोरोना भाइरस स्वयंले दया ग¥यो भने मात्र फर्किए घर आउँछ नत्र केही दिनमा शव बनेर आर्यघाट तर्फको यात्रा नै उसको दुखान्त नियति हुनेछ ।